Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius kubadda cagta oo sida ugu fiican loo yaqaan "Jack". Sheekadeena Taariikhda Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqooyinka Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish- Falanqaynta ilaa Taariikhda. Credits si IG, Twitter, Symimes iyo xigeenka.
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskiisa, noloshiisa hore ee shaqada, wadadiisa sheeko caan ah, u kac sheeko caan ah, xiriir, nolosha shaqsiyeed, nolosha qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iwm.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay kartidiisa inuu ku ordo iyo inuu iska difaaco difaacii hore. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa ka fiirsanaya biography Jack Grealish kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabista, Jack Peter Grealish wuxuu ku dhashay maalinta 10th ee Sebtember 1995 hooyadiis Karen Grealish iyo aabaha Kevin Grealish oo ku yaal magaalada Birmingham, United Kingdom. Hoos waxaa ku yaal sawir qurxoon oo waalidiinta Jack Grealish ee eegaya dabayaaqadii 40's.
Jack Grealish Waaliddiinta- Karen iyo Kevin Grealish
Kubadsameeyaha Ingriiska oo leh xidid qoys ee Ingriis iyo Irish ah wuxuu u dhashay cunuggii ugu horreeyay ee seddex carruur ah waalidkiis Karen iyo Kevin oo iyagu caqiidooyin Katoolik ah. Wuxuu ku dhashay ilmo faraxsan oo ku raaxaysta faa'iidooyinka kasta ee ugu horreeya.
In kasta oo uu ku dhashay Birmingham oo ah qoys dabaqadda dhexe ah, Jack waxaa lagu soo barbaaray wiilkiisa yar Kevan Grealish iyo walaalo- Kiera iyo Holly. Wuxuu ku soo barbaaray Solihull, oo ah magaalo weyn oo Ingriis ah isla markaana hoy u ah warshadda wax soo saarka ee baabuurta caanka ah ee afar-giraangiraha leh Land Rover.
Jack Grealish Meesha Dhalashada. Ku mahadsan WorldAtlas
Jack noloshiisii ​​hore ee ku barbaaray Bartamaha England waxaa ku dhacay musiibo qoys. Grealish wuxuu goob joog u ahaa geerida walaalkiis oo ku magac dheer Keelan Daniel Grealish. Wuxuu dhintay markii Jack yar oo keliya uu jiray oo keliya afar sano jir. Little Keelan Daniel sawirka hoose wuxuu ku dhintey COT geeri markuu jiray sagaal bilood bishii Abriil 2000.
Jack Grealish wuxuu waayey walaalkiis ka yar markuu afarta sano jiray. Amaahda IG
Sida Google u dhigeyso, geerida noocan oo kale ah ayaa loo yaqaanaa dhimashada degdega ah ee ilmaha yar (SIDS) waa eray loo isticmaalo in lagu qeexo geeri kedis ah oo ilmuhu ku dhinto hurdada oo aan sabab iyo sabab toona aan loo helin.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Ku noolaanshaha Solihull wuxuu arkay qoyska Jack Grealish marka lagu daro carruurta ka soo jeeda qoysaska katooliga ah ee carruurtoodu dhigato Dugsigayaga Marwo Naxariis ee Roman Catholic Primary School. Grealish wuxuu guul ka helay isboortiga intii uu ku sugnaa iskuulka, taas oo sababtay go'aankiisa ah inuu raaco kubada cagta. Marka laga hadlayo kubada cagta, xubin kasta oo ka tirsan qoyska Jack Grealish waxay ahaayeen taageerayaasha Aston Villa.
Jack wuxuu heystaa ciyaaryahankiisii ​​ugu fiicnaa Aston Villa inuu noqdo Paul Charles Merson, waa ciyaaryahankii hore ee kubada cagta oo ku guuleystey kubadsameeyaha iyo kubadsameeyaha Aston Villa. Paul ayaa markii dambe noqday TV-ga kubada cagta Ingiriiska ee loo yaqaan 'SkySports'. Hoos waxaa ku yaal sawirka Jack oo ku yaal shaati Aston Villa oo uu la socdo inaadeerkiis oo ay weheliyaan sanamkiisa kubada cagta Paul.
Jack Grealish (bidix) isagoo caruur ah, oo uu adeer u yahay Sean Mills iyo Paul Merson (dhexda)
Xilligaas ka dib, labada wiil waxay caado ka dhigteen in lagu sugo bannaanka xerada tababarka ee Villa si ay sawirro ula galaan Paul Merson, oo ah sanamyadoodii u saftay 101 Premier League oo ka soo muuqday Villa min 1998 ilaa 2002.
Marka laga soo tago booqashada tababbarka ee Villa, ayuu da 'yarta Jack qaatay tababar kubbadda cagta si ay ula socdaan raadadkii Paul Merson. Ku ciyaarista kubada cagta maxalliga asxaabtiisa uma arkin kaliya inuu ka sii fiicanyahay xirfadiisa, Ka hor tagida calaamadiisa laakiin ku sameysa wax ka baxsan buluuga kubadiisa kubadaha. Kuwaasi waxay ahaayeen waxyaabo la mid ah kii qadka dhexe ee weerarka.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Mudnaanta Hore
Farxadda ay soo martay qoyskii Jack Grealish wax xaddidan ma leh markii ay arkeen tijaabooyin aad u gaar ah oo midabbo kala duwan leh isla markaana isu qorey xarunta akadeemiyada Villa.
Jack Grealish- Nolosha Xannaano Hore oo ay lajirto Villa Academy. Amaahda IG.
Bixinta kubbadda cagta bilowga hore waxay ahayd waxa waaliddiinta Jack Grealish ay rabeen wiilkooda. Intii uu u ciyaarayay akadeemiyada Aston Villa, Jack wuxuu sii waday waxbarashadiisa sida ay ku taliyaan waalidkiis oo aan dooneynin inuu kubada cagta kaliya ku dhejiyo. Isku-darka dugsiga iyo xirfadda kubbadda cagta wuxuu arkay Grealish inuu sameeyo allabaryo badan, sidaas darteed wuxuu ku haray celcelis ahaan ciyaartoy akadeemiyadeed saaxiibadiisa.
Sawirka Qoyska Jack Grealish
Jack wuxuu ku guuleystay koobkiisii ​​ugu horreeyay da'da 7. Ma ogeyd?… Biladdiisa wuxuu ugu deeqay dugsigiisa isagoo ku sharfaya walaalkiis dhintay. Ku-deeqidda koobka ayaa ka dhigtay dugsiga inuu ku sharfo walaalkiis ka yar sidii ay u abuureen “Keelan Daniel Grealish Memorial Cup”Oo hadda loo isticmaalo in lagu sumeeyo tartamada guryahooda.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Waddada loogu talagalay sheekada
Kadib markii uu ka qalin jabiyay Our Lady of naxariis ee Roman Catholic Primary School ee Solihull, Jack wuxuu sii waday waxbarashadiisa dugsiga sare xitaa isagoo ahaa akadeemiyad akadeemiyada St Peter's Secondary School. Wuxuu ogolaaday waalidkiis in waxbarashada dugsiga sare ay noqon doonaan kiisii ​​ugu dambeeyay, go'aan kaas oo la rumeysan yahay inuu ka caawin doono inuu xoogga saaro shaqadiisa.
2012 – 2013 xilli ciyaareedku wuxuu ahaa meel u rogaya xirfada Jack Grealish madaama uu ka caawiyay kooxdiisa sidii ay ugu guuleysan lahaayeen taxanaha NextGen. Hoos ka arag daqiiqada ay u dabaaldegayeen koobka.
Jack Grealish- Ka caawinta kooxdiisu inay ku guuleysato taxanaha 2012 – 13 NextGen. Dhibcaha loo diro Birmingham Mail
Tartankan waxaa qabtay 24 dalal kala duwan oo ku baahsan Yurub oo dhan laga bilaabo 15th of August 2012 illaa 1st ee bishii Abril 2013. Guushaani waxay dhalisay in Ingriiska iyo Ireland ay u dhasheen hibo ay ku helaan soo wicitaan heer sare ah iyo wicitaan kale oo loogu yeero xulkiisa qaran ee Ireland.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Kusoo sharax sheekada
Weli wuxuu kusii jeedaa goobta qaran ka dib markii uu ka soo wareegay Ireland oo uu ku biiray xulka England U21, Jack ee 2016 wuxuu ka caawiyay kooxdiisu inay ku guuleystaan ​​Toulon Tournament caan ah.
Jack Grealish oo u dabaaldegaya Xulka Xulka Xulka Toulon 2016 oo ay wehelinayaan saaxiib
Grealish ka dib tartanku wuxuu sii waday inuu u iftiimo sidii xiddig garabka ka ciyaara oo qadka dhexe weerarka ka ciyaara. Waxaa lagu amaaney awooda uu u leeyahay inuu sida ugu dhaqsaha badan u ordo. Natiijadii dhaqdhaqaaqiisa nimcadiisa, wuxuu helay abaalmarin maadaama uu noqday ciyaartoy heerka koowaad iyo ka dib, kabtan ahaan. Hogaamiye ahaan, Jack wuxuu ku hogaamiyay kooxdiisa sidii ay u aadi lahaayeen koox ku guuleysata rikoorka kooxda ee 10 horyaal.
Jack Grealish Rise oo sheekada caan ku ah Aston Villa
Markale, wuxuu sidoo kale ku hogaamiyay kooxdiisa qaab ciyaareedkiisa Villa inay ku ciyaaraan kulamada play-off halkaas oo guulaha ay ka gaareen kooxaha ay xafiiltamaan ay u horseedeen inay u sii gudbaan Premier League ka dib seddex sanno oo uu maqnaa. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Xiriirka
Dhabtii A Leg Villa Legend, waxaa jira saaxiibad moodada layaabka leh shaqsiga Sasha Attwood.
Jack Grealish iyo saaxiibtiis- Sasha Attwood. Ku mahadsanid Fikraddaada.
Jack Grealish wuxuu la kulmay saaxiibtiis intii uu ku jiray dugsiga sare. Labadooduba waxay ahaayeen dhallinyaro wax ku bartay dugsiga sare ee St Peter's Roman Catholic Secondary School ee Solihull. Way wada joogi jireen weligood (sida wakhtiga qorista), oo ah astaan ​​u ah xiriirkooda rikoodh-la'aanta ah.
Sasha Attwood ayaa tusaale u ah Birmingham. Waxay billowday shaqadeedii kadib markay wakiil ka noqotay wakiilo da’da 13 intii ay ka maqneyd hooyadeed dalkeeda. Attwood wuxuu hada u saxeexan yahay MOT Models, oo kamid ah London iyo wakiilada hogaaminta moodada moodada dharka ee Yurub.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Naftaada Shaqsiga
Maxaa ka dhigaya Jack Grealish sax?. Fadhiiso oo isdeji iyadoo aan kaa caawineyno inaad sawir buuxa ka hesho shaqsiyadiisa garoonka dhexdiisa.
Bilaabidda, marka ay timaado xiddigaha kubada cagta, mowduuca “ciyaartoy qurux badanBadanaa wuxuu ka mid yahay khudbadaha uu jecelyahay. Taageerayaal badan ayaa u arka Jack Grealish sidii a Beckham wannabe mahadsanid quruxdiisa oo lagu soo koobay sawirka hoose.
Jack Grealish Xaqiiqda Nolosha shaqsiga
Isaga oo sii daaya quruxdiisa, taageerayaasheeda badan ayaa weydiiyay su'aasha;… Muxuu Grealish u xirtaa funaanadaha carruurta oo xijigiisa ubbada sharafta leh inta uu ciyaarayo?
Jawaabtu way fududahay !!. Waxyaabihii Grealish wuxuu u eg yahay natiijo ka timid aaminaad suuxdin ah oo isagu uu shaqeeyay. Waxay ka caawineysaa inuu sii wado awoodiisa inuu kubada si habsami leh u maareeyo. Grealish wuxuu kaloo jecel yahay inuu ka gooyo cidhibta kabahiisa oo ay weheliso sharaabaadkiisa gaaban ama mid dheer oo duudduuban.
Jack Grealish Superstition ayaa sharxay
Caqiidada noocaan ah waxay aragtay garsoorayaasha inay uga digayaan inuu jiido sharaabaadkiisa iyo ficilka xirashada luqadaha carruurta.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Qoyska
Qoyska Jack Grealish waa dhamaan taageerayaasha Aston Villa. Xubnaha qoyskiisa ee ugu dhow ayaa ku jira 6 dhammaantoodna waa Ingiriis ku dhashay Irish dheereed iyo qaraabo. Mid ka mid ah walaalkii Jack, Kevan Grealish ayaa ka maqan sawirka qoyska ee hoosta.
Sawirka Qoyska Jack Grealish. Amaahda IG
Jack Grealish wuxuu ka mid yahay cayaaryahannada ugu sareeya kubadda cagta oo aabbayaashood wakiil u ah. Kevin wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha kubada cagta wiilkiisa. Laga soo bilaabo gorgortanka shuruudaha wanaagsan ee qandaraaskiisa ilaa maareynta noloshiisa ka baxsan, waxaas oo dhan wuu sameeyaa. Hooyada Jack Karen Grealish ma ahan mid cod badan, kana duwan ninkeeda. Waxay doorbidaa inay xoogga saarto waajibaadka hooyadeed ee hooseeya. Labada waalid ee Jack Grealish ayaa hadda ka faa'iideysanaya faa'iidooyinka ay ku leeyihiin ubadkooda ku dhajinta maskax adag.
Walaalkiis Jack Grealish: La kulan Kevan Grealish oo ay taageerayaashu u yaqaanaan inuu yahay kan yar ee Jack isla markaana kaliya ka badbaaday walaalkiis. Kevan sida waalidkiis iyo walaashiis sidoo kale waa taageere u dhinta Villa.
La kulan Jacks Brother- Kevan Grealish. Amaah BMAil
Kevan wuxuu cinwaanno hore uga soo qaatay dowrkiisii ​​uu ku difaacay walaalkiis ka weyn faallooyinka xun ee ay warbaahinta u soo gudbiyeen. Marka loo eego 101GreatGoals, wuxuu mar u qaatay warbaahinta inuu qashinka ka qaado sheekada uu sameeyay wariye James Nursey oo ka tirsan majalada Mirror Football kaasoo sheegtey in Grealish uu ahaa “wadna xanuun"Iyo"hoos u dhigKadib guuldaradii Tottenham ee fashilantay.
Jack Grealish Walaalkiis Kevan wuxuu laayay muraayadda. Ku mahadsanid 101GreatGoals
Walaalaha Jack Grealish: Jack wuxuu leeyahay laba gabdhood oo qurxoon oo walaalo ah oo leh magacyo Holly iyo Kiera. Curadka labada walaasheed, Kiera waxay u dabaaldegtay dhalashadeeda 14th maalinta 14th ee October 2015. Tan macnaheedu waa iyada waxay u weecnaan doontaa qof weyn sanadka 2019.
Jack Grealish iyo Sisters- Holly (bidix) iyo Kiera (midig). Amaahda IG
Ku saabsan Jack Grealish ee GrandParents: Ayeeyaasha Jack waa sababaha dhaxalka Irish. Isaga ayeeyo aabihii waxay ka timid Sneem, tuulo ku taal Jamhuuriyadda Ireland. Jack Grealish wuxuu sidoo kale leeyahay xidid Irish asaga oo ah awoowe hooyada oo ka soo jeeda Dublin.
Awowyadii Jack Grealish. Amaah ku socota Ireland Herald. Amaahda IG
Dhiiga Irish wuxuu kaloo ka socdaa aabihiis maadaama aabihiis aabihiis sidoo kale uu ka yimid Ireland si sax ah Gort, oo ah magaalo ku taal koonfurta Galbeedka Galway ee Ireland. Go'aan ka gaarista tan, waxaad si fudud u ogaan kartaa inuu been abuur yahay oo lala xiriiriyo dhaxalka Irish.
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - LifeStyle
Dabeecadda Jack ayaa ah in lacag la keydiyo mar walbana dhinac la dhigo wax. Wuxuu u arkaa iibsashada gawaarida qalaad iyo Mansions inay yihiin kharash aan macquul aheyn iyo dhaqan xumo ama arrin la boobo. Sida waqtiga qoraalka, Jack wuxuu doortaa inuu ku sii hayo xalalka ficil ee aan qarash badan kubixin. Tani waa qeexitaan ku saabsan qaab nololeedka Jack Grealish.
Xaqiiqooyinka Nolosha ee Jack Grealish. Amaahda IG
Sheekada Carruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
NATIIJADA KU SAABSAN DHAQANKA: Qiyaastii Abriil 2015, TheSun ayaa sida la sheegay soo daabacday sawirro muujinaya Jack Grealish si uu u nuugo waxa loo yaqaan 'nitrous oxide', gaaska qosolka leh, ama 'hippy crackujeeddooyin madadaalo.
Jack Grealish oo ku jira falka. Amaahda FoxesTalk
TheSun wuxuu cadeeyay in falkaasi uu dhacay qiyaastii 6 bilo kahor, oo ficilku uusan aheyn mid soo saarey waxqabadka Jack ee dhawaanahan naadigiisa. Ficilkan ayaa u arkay isaga inuu uga digay Tim Sherwood, maamuleheedii hore.
Caawiyihii loo diray JAIL: Maalintii 10th ee Maarso 2019, Grealish waxaa weerarey qof caan ka ah garoonka kaasoo ku soo duulay garoonka si uu u weeraro inta lagu guda jiray kulankii Villa derby ee ka dhacay Birmingham City.
Daqiiqad Jack Grealish waxaa soo weeraray Fan. Ku mahadsanid FiidkiiStandard
Mar dambe qeybtii labaad, Grealish wuxuu sameeyay bayaan isagoo dhalisay inuu Aston Villa siiyo guushii 1 – 0. Weeraryahanka 27-sano jirka ah ayaa la qabtay oo maxkamad la saaray halka uu ka qirtay dembiyada ku lug lahaanshaha garoonka iyo weerarka. Waxaa lagu xukumay xabsi toddobaadyo 14 ah.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Caruurnimada Jack Grealish iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Xusuus-qorka Kubadda Cagta Aston Villa